Caabudaadda Reerka Waa Maxay?
Ilaa waayihii hore Yehowah wuxuu rabay inay reeraha oo dhan waqti isla qaataan siday u xoojiyaan xiriirkay isaga la leeyihiin iyo kan reer ahaan iyaga ka dhexeeya. (Sharciga Kunoqoshadiisa 6:6, 7) Sidaas daraaddeed bay Markhaatiyaasha Yehowah toddobaad kasta waqti u siiyaan caabudaaddooda reer ahaan. Waqtigan iyagoo joogo meel ay ku istareexi karaan bay ka wadahadlaan waxyaalaha Ilaahay ku saabsan oo reerkooda gaar u ah. Xitaa haddii ad keligaa deggan tahay waqtigan waxaa u isticmaali kartaa Ilaahay inaad u dhowaatid oo Kitaabka wax ka baratid.
Waa waqti Ilaahay loo dhowaado. “U soo dhowaada Ilaah, isaguna wuu idiin soo dhowaan doonaa.” (Yacquub 4:8) Ilaahay wax baan ka sii baranaa markaan Eraygiisa Bibleka ka barano waxa dabeecaddiisa iyo shuqulladiisa ku saabsan. Adiga iyo reerkaaguba waxaad wada akhrisan kartiin Kitaabka Quduuska ah sidaad si sahlan u bilaabtiin caabudaadda reerka. Malaha waxaad la socon kartiin qorshaha Kitaab akhriska oo ka mid ah Kulanka Nolosha iyo Wacdiga. Qof walba oo reerka ka mid ah baa qayb uu Kitaabka Quduuska ah ka akhriyo la siin karaa. Kaddibna waxaad ka wadahadli kartaan wixii ad ka barateen qaybahaas.
Waa waqti ay reerku isku dhowaadaan. Markay reer ahaan Kitaabka u dhigtaan nimanka iyo xaaskooda, waalidka iyo carruurtaba xiriirka ka dhexeeya bay xoojiyaan. Waqtigan wuu inuu ahaado waqti nabad badan oo farxad leh oo la xiiseeyo toddobaad walba. Waalidka waxay dooran karaan inay ka wadahadlaan tacliimo waxtar leh oo daʼda carruurtooda ku xiran. Malaha waxay dooran karaan wargeysyadeenna mid ka mid ah ama waxyaalaha lagu soo bandhigay websitekeenna jw.org. Waxaad ka wadahadli kartiin mushkilad ay carruurtaada iskuulka kula kulmeen iyo sida la yeeli karo. Xitaa barnaamij baad ka daawan kartiin JW Broadcasting (tv.jw.org) dabadeedna ka sheekeysta. Caabudaadda reerka kaddib heesaha kulanka laga qaado baad baran kartaan oo cabitaano iyo cunto fudud baad wada cuni kartaan.
Waqtigan gaarka ah oo toddobaad kasta caabudaadda Yehowah loo isticmaalo qof walba oo reerka ka tirsan buu ku caawiyaa inay ku farxaan Erayga Ilaahay. Yehowah si weyn buu kuu barakeyn doonaa dadaalkaaga aawadiis.—Sabuurradii 1:1-3.
Maxaan waqti ugu qorsheynaa caabudaaddeenna reer ahaan?
Sidee bay waalidka waqtigaas uga dhigi karaan waqti xiiso leh?
Sidaad fekrado cusub u heshid weyddii kuwa kulanka jooga siday u sameeyaan caabudaaddooda reerka. Soo ogowna wargeysyada yaallo Hoolka Boqortooyada oo carruurtaada ku caawin karo inay Yehowah bartaan.
Wadaag Wadaag Caabudaadda Reerka Waa Maxay?